Hoteel Casri ah oo laga furay Magaalada Muqdisho (DAAWO SAWIRRO) – Radio Daljir
Febraayo 10, 2013 1:02 g 0
Muqdisho, Feb 10- Magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga furay hotel casri ah, iyadoo furitaankii hoteelkan ay ka qaybgaleen xubno ka socday dowaldda oo ay ka mid ahayd wasiir ku xigeenka wasaaradda khayraadka dalka, Siciido Xasan Cismaan, ganacsato, culummo, waxgarad iyo dadweyne kale.
?Waan soo dhaweynaynaa hoteelka, waana mid ka duwan hoteellada ku yaalla Muqdisho,? ayay yiraahdeen qaar ka mid ah xubnihii ka hadlay furitaanka oo sheegay in hoteelkan ay u dhameystiran yihiin adeegyada loo bahan yahay oo dhan.
?Hoteelka wuxuu leeyahay meel lagu diyaariyo cunnooyinka diyaaradaha; waxaana jooga kariyeyaal khibrad durugsan u leh sida loo diyaarinayo cunnooyinka diyaaradaha, muddo dheerna kasoo shaqaynayay shirkadda diyaaradaha ee Emirate Airline,? ayay yiraahdeen ganacsatada furtay hoteelkan casriga ah.
Tan iyo markii magaalada Muqdisho ay isaga baxday Al-shabaab waxaa laga furayay hoteelo iyo dukaamo ganacsi oo waaweyn, iyadoo hoteelkan uu noqnayo mid ka mida hoteelada ugu caalamisan hoteelada ku yaal caasimadda, wax badana ka qayb qaadan doona hormarka magaalada iyo bilcdeeda.